စင်ကာပူ ကဲ့သို့ အိမ်ရာစီမံကိန်း ဒဂုံဆိပ်ကမ်း၌ ဆောက်မည် | ဧရာဝတီ
စင်ကာပူ ကဲ့သို့ အိမ်ရာစီမံကိန်း ဒဂုံဆိပ်ကမ်း၌ ဆောက်မည်
ဂျူးဂျူးလှိုင်| January 10, 2013 | Hits:3,643
4 | | ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်အတွင်း ကျူးကျော်တဲများ ဆောက်နေပုံ(ဓာတ်ပုံ-ဂျူးအယ်/ဧရာဝတီ)
စင်ကာပူ ကဲ့သို့ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ရတနာ အိမ်ရာနှင့် ဧရာဝဏ် အိမ်ရာ စီမံကိန်းအား ၃ နှစ်အတွင်း အခန်းပေါင်း ၁၇၀၀၀ ကျော် ပါဝင်သည့် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ ဆောက်လုပ်သွားရန် စီစဉ်နေကြောင်း မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ် ဖွံ့ဖြိုးမှု ဦးစီးဌာန က ပြောသည်။
“ရတနာ နဲ့ ဧရာဝဏ် အိမ်ရာဟာ အခန်းပေါင်း ၁၇၄၈၀ ဆောက်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ထားတယ်၊ အထပ်အမြင့်ကတော့ ၁၈ ထပ် အိပ်ခန်း နှစ်ခန်း ပါတယ်၊ အဆင့်မြင့်အိမ်ရာ အထပ်မြင့်အိမ်ရာ တန်ဖိုးအားဖြင့် အနည်းဆုံးနဲ့အများဆုံးကို တွက်တုန်းရှိပါသေး တယ်၊ ပညာရှင်တွေနဲ့ တိုင်ပင်နေတယ်၊ တန်ဖိုးကို တတ်နိုင်သလောက် လျှော့ချပြီးတော့ လုပ်မှာပါ၊ ၀င်ငွေနည်းတဲ့ ပြည်သူလူထု ကို ရည်ရွယ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်”ဟု မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ် ဖွံ့ဖြိုးမှု ဦးစီးဌာန မြေခွန်မြေတိုင်း ညွန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်ဦး က ပြောပြသည်။
ထိုစီမံကိန်းတွင် လူဦးရေ ၈၀၀၀၀ ကျော် နေထိုင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အစိုးရက ပုဂ္ဂလိက ၀န်ထမ်း၊ အစိုးရ ၀န်ထမ်း မည်သည့် ၀န်ထမ်းမဆို အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အထိ ပေးသွင်းနိုင်ရန် စီစဉ် ရောင်းချ ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် များပြားလာမည့် လူဦးရေအပေါ် မူတည်၍ ရန်ကုန်မြို့နှင့် စင်ကာပူတို့ကဲ့သို့ မြိြု့ပ စီမံကိန်းများလည်း လုပ်ဆောင် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် ကျူးကျော်နေထိုင်သူများကို ဖယ်ရှားရမည့်အခက်အခဲများ ရှိနေကြောင်း၊ လတ်တလောတွင်ပင် ကျူးကျော်နေထိုင်သည့် တဲ အလုံး ၁၀၀ နီးပါး ရှိနေကြောင်း၊ ထိုသူများကို အစားပြန်ပေးမည် မဟုတ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ် ဖွံ့ဖြိုးမှု ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးရွှေဝင်း က ပြောသည်။
ဒဂုံ မြို့သစ် ၆၇ ရပ်ကွက်၌ နေထိုင်သည့် ဒေါ်ကြင်သိန်း ကမူ“ကျမတို့ ဒီနေရာမှာ နေလာတာ ၁၈ နှစ် နီးပါးရှိပြီ၊ အခု ရွေးကောက် ပွဲပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှုးတွေက မြေ ရောင်းစားမှုတွေ ရှိလာတော့ ကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေ တော်တော် များများဝင်လာ တယ်၊ ဒီစီမံကိန်းဖြစ်လာတော့ ကျမတို့လို နှစ်တွေအများကြီး နေထိုင်တဲ့သူတွေကို ထည့်စဉ်းစားပေးသင့်တယ်”ဟု ပြောဆိုသည်။
ယင်းသို့ ကျူးကျော်နေသူများစွာသည် ဆယ်စုနှစ် မကကြောင်း၊ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများက ရောင်းစားထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို အိမ်ရာ စီမံကိန်းများသည် အခြေခံ လူတန်းစားများအတွက်ပါ အခွင့်အရေးဖြစ်၍ ကျူးကျော်နေထိုင်သူများလည်း အိမ်ခန်း ၀ယ် ယူခွင့် ရရန် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရသို့ တင်ပြထားကြောင်း ဒဂုံ ဆိပ်ကမ်း စက်မှုဇုန် စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ ဥက္ကဌ ဦးအေးလွင် ကလည်း ပြောသည်။
ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၈ ဆက် ခန့် အဆက်ဆက် ကျူးကျော် နေထိုင်သူ ၁၀၀၀ နီးပါးရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ နေရာ အစားပြန်မပေး ပါက လက်ရှိနေရာမှ ဖယ်ပေးနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာသို့ တောင်းဆို ဆန္ဒပြမှုများ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကျူးကျော် နေထိုင်သူတဦးက ပြောဆိုသည်။
ထို ရတနာ အိမ်ရာနှင့် ဧရာဝဏ် အိမ်ရာ စီမံကိန်းများအပြင် ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့သစ် အရှေပိုင်း ယုဇန ဥယျာဉ် အနီးတွင်လည်း အိမ်ရာစီမံကိန်း ဆောက်လုပ်ရန် စီစဉ်နေသကဲ့သို့ ရန်ကုန် ဟို တယ်ဇုန် အစီအစဉ်ဖြင့် မြေနေရာဧက ၂၀၀ ပေါ်တွင် ဟိုတယ်ဇုန် အသေး တည်ဆောက်သွားရန် စီစဉ်နေကြောင်းလည်း ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။
ဦးခင်ရွှေနှင့် လယ်သမားများအမှု စစ်ဆေး
စွမ်းအင် မလုံလောက်၍ စက်မှုလုပ်ငန်းများ မဖွံ့ဖြိုး
စိုက်ပျိုးစရိတ် ချေးငွေ အစိုးရ လျှော့ချ
သစ်တောများ အပြောင်ရှင်းခုတ်နေ ဆိုသော စွပ်စွဲမှု သစ်တောဒုဝန်ကြီး ပယ်ချ
အော်ရီဒူးဖုန်းကတ် မှတ်ပုံတင်ရန် သက်တမ်း ၂ ပတ်တိုးမည်
2 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Lailun January 11, 2013 - 8:42 am	They do not know what they are talking about. We will see it soon anyway. Lee Kwan Yeow and Thein Sein are not the same. Mr. Lee was determined to do the job but Thein Sein is not. Thein Sein is not the real leader. He cannot even control the military. Mr. Lee was doing what he believed. Thein Sein is doing what Than Shwe asked him to do. Talk is cheap. The former junta said it the same tone.
Reply	ပြည်သူ January 11, 2013 - 9:48 pm	အိမ်ယာတင်မက မြို့ပြစနစ်ကိုပါစင်္ကာပူလို တပါတည်းစနစ်ကျအောင်လုပ်ဖို့လိုပါသည်။ အခုက ရန်ကုန်မြို့လယ်မှာတောင် ပလက်ဖောင်းတွေ၊ရေမြောင်းတွေ၊ကားလမ်းတွေစနစ်တကျရှိတာမဟုတ်ပါ။ ရန်ကုန်လမ်းဘေးမှာ လမ်းလျှောက်ရင်အပေါက်မကျွံအောင် အောက်ကိုဂရုစိုက်ပြီးကြည့်သွားနေရတယ်။ စင်္ကာပူမှာ လမ်းထွက်ပြီး ဘတ်စ်ကားစီး၊တနေကုန်ရှောက်လည်တာတောင် ကိုယ်ပေါ်မှာဖုန်တစက်မတင်ပါ။ ရန်ကုန်မှာတော့အိမ်ထဲနေနေ၊ လမ်းပဲထွက်ထွက် မျက်နှာကို လက်နဲ့သပ်လိုက်တာနဲ့ အသဲယားစရာ ဖုန်တွေချည်းပဲ။ ဒို့မြို့တော်ကိုလည်းအစစအရာရာ သူများမြို့တော်တွေလိုဖြစ်စေချင်၊ကြွားချင်တာပေါ့နော်။